Mamy Rakotoarivelo : « herinandro sisa isaina dia tonga Président RAVALOMANANA ! » (+vidéo)
Nambaran’i Mamy Rakotoarivelo, lehiben'ny delegasiona ankolafy RAVALOMANANA, teo amin’ny Magro Behoririka fa « herinandro sisa no isaina dia higadona eto Madagasikara ny Filoha RAVALOMANANA ». Nentaniny arak’izany ny mpitolona mba « hanao fanazaran-tena sahady » ka ho tonga maro isanandro eo amin’ny Kianjan’ny Finoana.
Araka ny tatitra natao teo amin’ny Magro dia tsy voaresaka tany amin’ny fihaonana indroa miantaona tatsy Seychelles izany resaka « ni-ni » izany.
Fankatoavana momba ny tetiandrom-pifidianana, filazana ny filatsahana ho fidiana na tsia ary ny fampiharana nyt andininy faha-20 sy faha-45 no notakian’ny SADC nandritra izany. Mazava izany fa fandrebirebena saim-bahoaka no antony ampielezana io resaka « ni-ni » io fa tsy misy mankatoa izany raha mbola rafitra na Firenena manaja ny zon’olombelona ihany koa.
Mpanongam-panjakana ve no hampihatra lalàna ? (+vidéo)
Melohin’ny andininy faha-96 amin’ny fifanarahan’i Cotonou ny fanonganam-panjakana notarihin-dRajoelina tamin’ny 2009. Tsy mbola nisy akory izay mety fifanarahana politika eo amin’ny samy Malagasy dia efa nipetraka izany. Fisorohana ny mety mbola iverenan’ny krizy no antony itakian’ny mpandala ny ara-dalàna ny hilatsahan’i tgv mba ho tsarain’ny vahoaka. Tsy azo lavina ny voarakitry ny andininy faha-45 ao amin’ny tondro zotra satria manome hajany ny fitsarana Malagasy. Fitsarana izay nohosihosen’ny FATE nanomboka tamin’ny andro namoahany ireo nolazaina fa « gadra politika » na dia mpanao politika nigadra aza ny ankamaroany.
Izany fandikan-dalàna rehetra izany anefa dia toa tsy misy eo imason’izy ireo ka ankehitriny dia izy nanongam-panjakana indray no manao tery vay manta mametraka fepetra amin’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA. Sarotra ny hanaiky hoe fahefana tsy ara-dalàna no milaza fa hampihatra lalàna eto Madagasikara. Ny tanjona rahateo tsy ny hifanenjana tsy akory fa ny hitady vahaolana amin’ny krizy izay efa manomboka mihatra amin’ny isam-baravarana amin’izao fotoana. Toa tsy mitovy amin’izany anefa ny vinan’ny ao Ambohitsorohitra fa ny hamikitra mafy amin’ny sezany no tena matotra ao an-tsainy. Amin’izao fotoana izao aza dia tonga any amin’ny fieritreretana ny hanao fitsapan-kevi-bahoaka mikasika ny fahafanan’ny Filoha RAVALOMANANA hirotsaka ho fidiana na tsia ny sasantsasany ao amin’ny fitondrana. Mandray roa avy hatrany ny tian-dRajoelina hatao ao anatin’izany : ny voalohany dia ny hampitombo ny andro hibodoany fahefana ary ny faharoa dia ny hanao izay tsy hahatafaverina ny Filoha RAVALOMANANA satria matahotra ny toerany. Tokony tsaroan’ny FATE anefa fa ny fanaovana « ni-ni » na koa fikasana hitondra ny fahafahana milatsaka eo amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mandrava avy hatrany ny tondro zotra noho izany mamafa izay hany lalàna velona mametraka an-dRajoelina eo amin’ny fitondrana.
Fanomanana ny fifidianana : dingana fototra ny fitoniana (+vidéo)
Toa efa maimay loatra raha ny fahitana ny votoatin’ny iraka nataon’ny COI teto Madagasikara andro vitsy izao. Maimay satria mandingana an-tanantohatra maro ny ady hevitra raha ny voalazany. Efa tonga any amin’ny resaka fanampiana amin’ny fampitana ny valim-pifidianana izy ireo ary mamaritra avy ahtrany fa « bulletin unique » hatonta atsy amin’ny Nosy Maorisy no ho entina miatrika izany fifidianana izany. Ny momba ny fametrahana ny fitoniana politika sy sosialy anefa tsy misy resaka mihitsy.
Raha voarakitra ao anatin’ny tondro zotra sy ny tatitra momba ny fivorian’ny SADC tatsy Maputo dia laharam-pahamehana amin’ny fivoahana amin’ny krizy ny fipetrahan’ny fitoniana mba tsy hitarika krizy vaovao indray ny fifidianana izay efa nifanekena fa hatao amin’ny taona hoavy. Mazava hoazy fa raha mbola hiziriziry hisakana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny filatsahany ho fidiana ny FATE dia sarotra ny hisian’ny fifidianana satria maro an’isa no miandrandra ny fiverenany eo amin’ny fitondrana. Raha toa moa ka hanao amboletra toy ny tamin’ny novambra 2010 i Rajoelina sy ny namany dia sady tsy hankatoavin’ny mpiray tanindrazana izany no hotsipahin’izao tontolo izao ka hiafara amin’ny fitokana-monina ho an’Ambohitsorohitra iray vohitra. Raha fehezina dia ny hametrahana fitoniana eto amin’ny Firenena no tokony fepetra voalohany tsy maintsy hajaina mialoha ny hametrapetrahana ny resaka teknika momba ireo fifidianana hatrehina amin’ny 2013. Ny teknika rahateo efa andraikitra fototra sy antom-pisian’ny CENI-T. Rehefa milamina ny resaka fitoniana dia azo atao ary tsy maintsy hatao ny mifamarafara amin’ny pitsopitsony hanatanterahana ny fifidianana mba tsy hisian’ny olana hafa hipoitra aorian’izany.
« Ni-ni » : tahotra ny Filoha RAVALOMANANA no tena antony (+vidéo)
Rehefa jerena ireo rehetra miezaka mandresy lahatra amin’ny tsy tokony hilatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i Rajoelina dia hita fa mpanao politika mba te-ho voafidim-bahoaka ny ankamaroany. Toa mahatsapa tena ho maivana anefa izy ireo raha manoloana ny Filoha hany ka aleony mody manely fa ny « ni-ni » no vahaolana ho an’ny Firenena. Raha ny tena marina mantsy dia tsy mila fifidianana akory dia mibaribary ny mbola fankatoavan’ny maro an’isa amin’ny vahoaka Malagasy ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eo amin’ny fitondrana.
Midona amin’ny rindrina tanteraka ireto karazana mpanao politika ireto satria raha mbola rafitra na olona mandala ny demokrasia ihany koa dia tsy hanaiky izany « ni-ni » izany velively. Tsy miafina ihany koa fa ny fifanilihana no tena fototry ny krizy miverimberina eto Madagasikara ary tsy hitondra mankany amin’ny fitoniana ihany koa ny tsy fahafahan’ny Filoha RAVALOMANANA milatsaka ho fidiana satria antom-pisian’ny tolon’ny mpandala ny ara-dalàna tao anatin’ny efa-taona latsaka izany.
Leriva Manahirana : « mbola betsaka ny asa miandry antsika» (+vidéo)
Tsy azo atao ny misioka raha tsy tafavoaka ny ala. Izay no azo amehezana ny hafatra nampitain’ny solombavam-bahoakan’i Brickaville ho an’ny mpiara-mitolona rehetra androany. « Marina » hoy izy « fa ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy dia mankasitraka ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eo amin’ny fitondrana saingy tsy azo atao ny mandrimandry manan’aretina ».
Nentaniny arak’izany ny rehetra mba hiasa tsy mitsahatra ho amin’ny fandresen-dahatra. Ny tanjona dia ny hahafantaran’ny mpiray tanindrazana rehetra fa amin’izao toerana misy ny Firenena izao dia ny Filoha RAVALOMANANA irery no azo antoka fa hitarika ny rehetra mankany amin’ny fanarenana haingana. Izany indrindra no amikiran’ny mpandala ny ara-dalàna aminy ary efa voaporofo tamin’ny fampandrosoana nentiny ny fahaiza-manao ananany momba izany.
Midina daholo …
Araka ny fanazavana nentin’i Leriva Manahirana hatrany dia nidina any amin’ny distrika sy ny faritra niaviany avokoa ireo olom-boatendry avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA rehetra hiatrika ny fametrahana ny rantsan’ny CENI-T. Raha ny fantatra dia tsy afaka mirotsaka hofidiana amin’ny fifidianana rehetra hatao eto Madagasikara ireo mpikambana ireo ary tsy mahazo manao fampielezan-kevitra manohana kandida ihany koa.